Gool-haye Kooxdiisa Bad-baadiyey Taariikhdana Gallay
HomeGermanyGool-haye Kooxdiisa Bad-baadiyey Taariikhdana Gallay
Goolwadaha naadiga Jarmalka ah ee Augsburg, Marwin Hitz ayaa kooxdiisa u suurto galliyey inay barbar dhac 2-2 ah ku kala baxaan kooxda Bayer Leverkusen kulan horyaalka Bundesliga ee Germany ahaa oo uu wakhti daayacii barbareeyey.
Hitz, oo ciyaartani ahayd tiisii koobaad tan iyo bishii November kadib markii uu ka soo kacay dhaawac jilibka ah oo uu u jiifay ayaa daqiiqadihii ciyaarta lagu daray oo socda kubad koornaha ah kooxdiisu heshay, waxaanu laagii koornaha ahaa u bedelay gool ay kooxdiisu dhibic ku heshay.
Goolwadahan reer Switzerland ee 27 jirka ahThe Swiss, 27, wuxuu kubada koornaha ah oo dhawr jeer noqnoqtay ka hellay goolka hortiisa si degdeg ahna wuxuu u dhaafiyey goolwadihii naadiga Leverkusen.
Sida ay xusayso taariikhda horyaalka Bundesliga, Hitz wuxuu noqonayaa goolwadihii saddexaad ee ciyaar dhexdeed ama ciyaar socota gool dhaliya ( kubadaha rigoodhaha iyo xanaaqadaha la laago aan ahayn).
Tottenham Vs Arsenal: Saadaasha Lineup-Ka Iyo Wararkii U Dambeeyey